LG K31 vaovao: endri-javatra, vidiny ary misy | Androidsis
Ny LG K31 no finday avo lenta vaovao misy fakantsary roa sy seho HD +
Niverina i LG, ary amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny finday avo lenta vaovao misy fanavaozana ny ampahan'ny teti-bolany. Miresaka momba izany isika LG K31, ilay telefaona nambara vao tsy ela izay natolotra ho filokana mifanaraka sy tsara ho an'ireo izay mila finday tsy misy fika sy famaritana tsara.
Ity fitaovana ity dia nisafidy ny hampita fampitaovana chipset Mediatek fa tsy avy amin'ny Qualcomm, zavatra manamaivana ny vidiny ary manome azy amin'ny vidiny ambany. Ny sisa amin'ireo kalitaony dia anisan'ny fanapahana faran'izay hitantsika ankehitriny.
1 Ny rehetra momba ny LG K31 vaovao
Ny rehetra momba ny LG K31 vaovao
Voalohany aloha, Ny LG K31 dia miaraka amin'ny efijery teknolojia IPS LCD sy ny vahaolana HD + 1.520 x 720 teboka, raha 5.7 santimetatra kosa ny diagonaly an'io. Ity iray ity koa dia mandray ny endrika amam-bika ambany endrika, ary koa ny bezela tonta ary saokany somary miharihary.
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ny processeur izay eo ambanin'ny sarin'ny finday dia Mediatek. Raha faritana bebe kokoa dia ity ny Helio P22 valo fototra, izay miasa amin'ny tahan'ny famelomana 2.0 GHz ambony indrindra. 2 GB ny RAM ary 32 GB ny habaka fitahirizana anatiny.
Ny rafitra fakan-tsary any aoriana izay ireharehany dia avo roa heny miaraka amin'ny flash LED ary manana sensor lehibe 13 MP sy sensor 5-zoro malalaka ho an'ny sary malalaka. Mandritra izany fotoana izany dia misy fakan-tsary 5 MP milaza fa "manatrika" eo amin'ny faran'ny efijery noho ny fakana sary selfies sy ny famohana ny tarehy.
Ny batterie izay manome hery ny zava-drehetra dia misy fatrany 3.000 mAh, izay somary mahantra ary ambanin'ny fenitra ankehitriny, izay 4.000 mAh. Ankoatr'izay, raha ny momba ireo fiasa hafa dia manana Android 10 sy mpamaky rantsantanana aoriana izy io.
Amin'izao fotoana izao, ny LG K31 dia nambara fotsiny ho an'ny tsenan'i Etazonia, saingy atolotra any amin'ny faritra hafa atsy ho atsy. Ny vidiny dia $ 149.99 (eo amin'ny 126 euro eo ho eo ny fanovana) ary volondavenona ihany no atolotra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny LG K31 no finday avo lenta vaovao misy fakantsary roa sy seho HD +
Avy amin'ny mpamorona ny Soul Knight no tonga ny Otherworld Legends, toy ny mpangalatra amin'ny hetsika ochontera madio
Ahoana ny fananana fihetsika paompy indroa ao ambadiky ny finday Android 11 / iOS 14 anao